रेखाको झापड उपहार पाउने गाइजात्रे लेख – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
नामै त ‘गाइजात्रा’ अनि हाम्रा गाइजात्रे कलाकार र गाइजात्रे पत्रकारको बीचमा गाइजात्रे झापड हानाहान गराउने लेखमा खासै नयाँ कुनै कुरा छैन । सबै जसो सुनिसकेका जोक संगालेर रेखालाइ पागल भएर छबी संग पारपाचुके गरेको भन्ने आशयको यस गाइजात्रे लेखलाइ रेखाले अनाबस्यक महत्व दिएको हो कि ?
भएको के थियो भने, सौर्य दैनिकका पत्रकार चिरन्जिबी पौडेलले एक गाइजात्रे लेख लेखे रेखा थापाको मिनी स्कर्टको बिषयमा चलेका जोक संगालेर । रेखालाई चित्त बुझेनछ र सौर्य दैनिकको कार्यालयमा गएर तेस्तो लेख लेखेको बिरोध गरिछन । त्यहाँ भनाभन हुँदै गर्दा रेखाले चिरन्जिबी पौडेलको गालामा एक चड्कन लगाइछन । त्यसको बदलामा पौडेलले पनि एक झापड हानेछन । (अंग्रेजीमा)
झापड हानाहान गराउने सौर्य दैनिकमा छापिएको लेखको पूर्ण पाठ तल दिइएको छ:
रेखा थापाको मिनिस्कर्ट रहश्य
एक दिन सुटिङमा जानेबेला रेखा थापा आफ्नो मिनिस्कर्ट खोज्दै थिइन् । नभेटेपछि श्रीमान् छवि ओझालाई सोधिन्, ‘डयाडी, (रेखा आफ्नो श्रीमान्लाई डयाडी भन्छिन्) तपाईंले मेरो गुलाबी कलरको मिनिस्कर्ट देख्नुभयो ?’
छवि : ऊ त्यो सलाइको बट्टाभित्र
रेखा थापालाई एकजना फ्यानले विदेशबाट साइनिङ अन्डरवेयर (चम्किने कट्टु) उपहार पठाइदिएका थिए । अमेरिकाबाट पठाइदिएको भनेपछि त्यो लर्तरो कट्टु थिएन । प्राय: हलिउड सेलिब्रिटीले लाउने त्यो कट्टु यति चम्किलो थियो कि धेरै बेरसम्म हे-यो भने जो कोही पनि त्यसको प्रकाश धान्न नसकेर बेहोस हुनसक्थ्यो । रेखालाई कट्टु साह्रै मनप-यो तर आखिर प-यो कट्टु । अरूलाई कसरी देखाउने भनेर समस्या प-यो उनलाई । तर, उपाय सुझ्यो । राति साइनिङ अन्डरवेयर लगाएरै सुतेकी रेखा भोलिपल्ट बिहानै आफ्नो सबैभन्दा खुकुलो मिनिस्कर्ट भिरेर सुटिङमा हिँडिन् । उनले सुटिङमा कुनै जुक्ति निकालेर अन्डरवेयर देखाउने विचार गरिन् ।
के भएछ भनेर निर्देशक उनको ठाउँमा आएर माथि हेरे । उनलाई पनि रेखाले खुट्टा फट्याएर देखाइन् । निर्देशक पनि धेरै बेर टिक्न सकेनन् र वाह .. वाह … भन्दै भुक्लुक्क भए । एवं रितले सुटिङ युनिटका सबैजना पालैपालो वाह .. वाह … भन्दै त्यहीँ ढले । अन्तत: त्यस दिन सुटिङ नै हुन सकेन ।
यता, रेखा आफ्नो साइनिङ अन्डरवेयरको करामत देखाउन पाएर गदगद हुँदै घर फर्किइन् । घर आउनासाथ उनले श्रीमान् छवि ओझालाई बेलिबिस्तार लगाइन, साइनिङ अन्डरवेयरको चमत्कारको । तर, छवि त टाउको समातेर रुन पो थाले । एकछिनमा फुलिएपछि उनले भने, ‘म बिहान उठ्दा तिम्रो साइनिङ अन्डरवेयर त मैले लगाएर हिँडेको थिएँ ।’
पत्रिकाहरूले साह्रै खेदो गरे भनेर एक दिन रेखाले आयन्दा मिनिस्कर्ट नलाउने निधो गरिन् । उनले यो कुरा श्रीमान्लाई सुनाइन् । ‘डयाडी म अबदेखि मिनिस्कर्ट लाउँदिन, पत्रिकाहरूले साह्रै खेदे ।’
तर, रेखाले भनिन्, ‘त्यति धेरै खुसी हुनुपर्दैन, डयाडी । मैले मिनिस्कर्ट लाउँदिनँ मात्र भनेकी हुँ, त्यसको ठाउँमा अर्थोक लाउँछु त भनेकी छैन नि ’
रेखा थापा फिल्मको सुटिङमा थिइन् । भिलेनलाई उनले किक हानेर ढाल्नुपर्ने दृश्य थियो । रेखाले मिनिस्कर्ट लगाएरै किक हान्न चाहिन् । दुवै जना तयार भए । निर्देशकले एक्सन भन्दै खुट्टा उज्याएर भिलेनलाई बजाउन रेखालाई इसारा गरे । रेखाले दायाँ खुट्टा उचालिन् तर मिनिस्कर्ट निकै टाइट भएकाले खुट्टा धेरै माथि उठेन । खुट्टा टेकिन् र फेरि अर्को खुट्टाले प्रयास गरिन् । यसपटक पनि उनको खुट्टा भिलेनको घुँडाभन्दा माथि पुग्न सकेन । उनले अलि बल लगाइन् । ला…, मिनिस्कर्ट नै ध्यार्र गर्žयो । सुटिङ युनिटका सदस्यहरू मुखामुख गर्न थाले । अर्को मिनिस्कर्टको जोगाड गर्न निर्देशकले सहायकलाई इसारा गरे । तर, रेखाले भने मिनिस्कर्ट बदल्न कुनै चासो देखाइनन् । बरु अलि लजाएजस्तो गरी मुसुक्क हाँस्दै सरी भनिन् । उनी टेक दिन फेरि तयार भइन् र खुट्टा उचालिन् । यसपटक अलि माथि पुर्žयाइन् । तर, मिनिस्कर्टको पछाडि भागमा झन् बेसरी ध्यार्र गर्žयो । यसपटक भने रेखा पनि लाजले पानी–पानी भइन् । ‘हिजो मासु धेरै खाएकी थिएँ,’ रातो–पिरो अनुहार लगाएर उनले भनिन् । त्यतिबेलासम्म वरिवरि रहेका सबै नाक थुनिरहेका थिए ।
केहीबेरमा पुलिस आयो र ‘नांगी बहुलाही’ लाई एउटा ठूलो कम्बलले घर्लप्प छोपेर गाडीमा हालेर लग्यो । रेखा केही भन्न खोज्दै थिइन् तर मौका पाइनन् । पुलिसचौकीमा लगेपछि भने उनले ठूलै आक्रोश झिकिन् । तिमीहरूले मलाई यहाँ ल्याउने हिम्मत कसरी गर्žयौ ? म को हुँ, थाहा छ ? म हिरोइन रेखा थापा हुँ, रेखा थापा ।
नेताहरू के भन्छन् ?
रेखाको मिनिस्कर्टबारे तीनजना नेताहरूसित मागिएको धारणा जस्ताको तस्तै
मने, नेपाली क्रान्तिको सन्दर्भमा यो बडो जटिल एवं अहं सवाल हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । कमरेड रेखा थापाजीको मिनिस्कर्ट र नेपाली क्रान्तिको के सम्बन्ध छ र भन्ने प्रश्न त एउटा कित्ताबाट निश्चितरूपमा उठ्ने नै छ तर हाम्रो गौरवशाली पार्टीको ठम्याइ के छ भने नेपाली क्रान्ति र मिनिस्कर्ट एक–आपसमा घुलमिल भएर आएका छन् र यिनलाई छुट्याएर हेर्न मिल्दै मिल्दैन भन्ने नै हो । हामीले मिनिस्कर्टको रूप पक्षलाई मात्र हेरेर हुँदैन, सार पक्षमा पनि जानुपर्छ भन्ने हाम्लाई लाग्छ । रूप पक्षमा अलिकति तडकभडक देखिए पनि सारमा यसलाई नेपाली महिलामुक्तिको एउटा महान् केन्द्रबिन्दुका रूपमै लिनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छँदै छैन । कामरेड थापाजीको जुन क्रान्तिकारी स्प्रिट छ, त्यो मिनिस्कर्टकै कारणले पनि हो भन्ने महान् नेपाली जनताले निश्चितरूपमा बुझेकै छन् ।
जस्तो मैले पनि विगतमा कमरेड रेखाजीसित कम्मर जुधाएर नाच्ने अवसर पाएकै हो र त्यसलाई मैले एउटा ‘ब्रेक थु्र’ का रूपमा लिएको छु । मने, त्यो घटनापछि म धेरै दिनसम्म मनमनै कुत्कुतिएको स्थिति पनि रहेको थियो । त्यतिबेला पनि उहाँले मिनिस्कर्ट नै लगाएर नाच्नुभएको भए अझै त्यसले महान् नेपाली क्रान्तिलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गथ्र्यो भन्ने पनि मलाई लाग्छ ।
‘काम पाइनस् बुहारी पाडाको कन्डो कन्या’ भन्या जस्तो प्रश्न भो यो त † को हुन् रेखा थापा ? सूर्यबहादुर थापाकी छोरी हुन् ? कि कमल थापाकी भाइबुहारी ? ए, साँच्ची अस्तिनै हुँदो सर्वहारावादी कामरेडसित ढिङ ठोक्काई–ठोकाई नाच्ने फ्याङ्ली हिरोनी हुन् क्यारे †
हुन त यस्ता खुद्रा–मसिना कुरामा बोलिहाल्ने बानी त होइन मेरो, तैपनि प्याच्च सोधिहाल्नुभो, उत्तर दिनैपर्žयो । ती नानीलाई जब म हेर्छु आक्कलझुक्कल टेलिभिजनमा । बडो उदेक लाग्छ । रंग न ढंगसित झ्याम्टा हल्लाएर लैनो बाछोजसरी उफ्रिदैमा हिरोइन भइन्छ ? देखाउनुपर्ने कुरा देखाउन सक्नु छैन, छोप्नुपर्ने कुरा ह्वाङ्गै देखाको छ । हिरोनीले देखाउनुपर्ने कला हो, त्यो चैँ छैन, छोप्नुपर्ने साँप्राहरू देखाएर दुनियाँका छोरालाई बिगारेकी छन् । रेखा थापा हुन् कि देखा थापा हुन् ? अँ, त्यो केजाति मिनिस्कर्ट रे † मुस्किलले गुप्तांग छोप्ने ४ इन्चको टालोलाई मिनिस्कर्ट भन्न मिल्ने हो भने मैले सिगान पुछ्न खल्तीमा बोक्ने गरेको पकेट रुमाललाई पनि मिनिस्कर्ट घोषणा गरिदिन्छु, हुन्छ ?
मलाई पहाडे हिरोइनको कुरा के सोध्नुहुन्छ ? पहाडे हिरोइन पनि कोई हिरोइन छ ? पारिका हिरोइनको कुरा गर्नुस् न ? प्रियंका चोपडाको लट्का हेर्नुस्, दीपिका पादुकोणेको झट्का हेर्नुस् । वाह † मुख रसाइहाल्छ । मिनिस्कर्ट त उनीहरूलाई पो सुहाउँछ । पहाडे हिरोइनको पुठ्ठा मिनिस्कर्ट लगाउने खालको कहाँ छ ? रेखा थापाको बात के गर्नुहुन्छ, पारिको रेखालाई हेर्नुस्, ६० साल पुग्दा पनि आग लगाउने जिस्म छ । नेपाली हिरोइनमा त के दम छ ? हेर्नुस्, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा त पूरा बाहुनवाद हाबी छ । सबै पहाडेहरूको हालिमुहाली छ । एकजना पनि मधेसी हिरोइन देख्नुभएको छ ? मधेसी जनतामाथि शासकले कति ठूलो विभेद गरेको छ हेर्नुस् त ? के मधेसका लड्कीलाई मिनिस्कर्ट लगाउन आउँदैन ? नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि अब समावेशी प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । मधेसीलाई ४० प्रतिशत आरक्षण छुट्याउनै पर्छ । अब बन्ने संविधानमा यस्तो आरक्षण व्यवस्था भएन भने हामी दोस्रो मधेस आन्दोलन गरिहाल्छौँ । मधेसमा पहाडेले बनाएका एउटा फिल्म पनि चल्न दिदैनौँ । एक मधेस एक प्रदेश हुनुपर्छ । नत्र मधेसमा आगो लाग्छ ।
This entry was posted in Artists, चलचित्र, Nepal and tagged chiranjivi poudel, gaijatra, Rekha Thapa, sourya dainik. Bookmark the permalink.
← समाचारवाचक प्रवीण गिरी प्रति श्रद्धाञ्जली
जो अगुवा … ट्राफिक पुलिसलाइ हेल्मेट लगाउनु पर्दैन? →